Dayax madoobaad la sheegay in laga arki doono qaarado badanoo adduunka ah | Berberanews.com
Home WARARKA Dayax madoobaad la sheegay in laga arki doono qaarado badanoo adduunka ah
Dayax madoobaad la sheegay in laga arki doono qaarado badanoo adduunka ah
Hargeysa (Berberanews)- Cirbixiyeenada ayaa soo uruurinaya macluumaadka dayax madoobaad la sheegay in uu dhacayo, kaas oo ay dadka qaar sheegayaan in uu la mid yahay kii bishii July dhacay oo loo bixiyay “Bil-dhiig”.
Dayax Madoobaanshuhu wuxuu dhacaa marka uu dayaxu galo hooska dhulka.
Habeenka uu dhacayo dayax madoobaadka, waxaa kaloo la socda wax la yidhaahdo “Bil dhiig”, sababta loogu bixiyeyna waa midabka guduudan ee uu yeelanayo dayaxa.
Dayax madoobaadku waxa uu billaabanayaa Isniinta oo ay taarikhdu ku beegantahay 21 January, iyadoo marka hore qeeyb ka mid ah dayaxa madoobaan doono.
Dhacdadaan ayaa ah fursaddii ugu dambeeysay ee ay cirbxiyeenada UK arkayaan dayax madoobaad tan iyo inta laga gaadho sanadka 2029-ka.
Previous article“Waxaynu isku haysano xal waynu ka gaadhi La’nahay, Somaliya hub urursi ayey ku jirtaa”Xildh.Qabile
Next articleDiyaarado dagaal oo duqeeyay idaacad ku hadasha afka Alshabaab